mida kale nayjeeriya waa wadanka ugu dadka badan africa
Nigeria waxaa badanaa lagu magacaabaa "Giant Africa", iyada oo ku xiran dadkeeda iyo dhaqaalaheeda. 186 milyan oo qof, Nigeria waa dalka ugu badan ee ku yaal Afrika iyo kan toddobaad ee ugu dad weyn adduunka. Dalka Nigeria wuxuu ku nool yahay adduunka saddexaad ee ugu weyn adduunka, ka dib Hindiya iyo Shiinaha, iyada oo in ka badan 90 milyan oo ka mid ah dadka ay da'doodu ka yar tahay 18 jir Waddanka waxaa loo arkaa inuu yahay waddan caalami ah iyada oo ay ku noolyihiin in ka badan 500 kooxood, kuwaas oo saddexda ugu weyn ay ka mid yihiin Hausa, Igbo iyo Yoruba; kooxdan qowmiyadeed waxay ku hadlaan in ka badan 500 luqadood oo kala duwan oo lagu aqoonsado dhaqamo kala duwan. Luuqadda rasmiga ah waa Ingiriis. Nigeria waxaa loo kala qaybiyaa qiyaastii kala bar Masiixiyiinta, kuwaas oo inta badan ku nool qaybta koonfureed ee dalka, iyo Muslimiinta, oo inta badan ku nool waqooyiga. Dad tiro yar oo ka mid ah dadku waxay ku dhaqmaan diimaha asaliga ah ee Nigeria, sida kuwa ku dhaqan Igbo iyo Yoruba. w:yo:nigeria
Waddnamha degaan NigeriaEdit
United States 7000+
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Nayjeeriya&oldid=228068"
Last edited on 6 Jannaayo 2022, at 20:44
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 6 Jannaayo 2022, marka ee eheed 20:44.